प्रभुले देखायो यस्तो प्रगति, चौथो त्रैमाससम्म १ अर्ब ७५ करोड खूद नाफा !
ARCHIVE, MARKET WATCH, RADIO » प्रभुले देखायो यस्तो प्रगति, चौथो त्रैमाससम्म १ अर्ब ७५ करोड खूद नाफा !
काठमाण्डौ । प्रभूू बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को चौथो त्रैमाससम्म १ अर्ब ७५ करोड खूद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म १ अर्ब ९६ करोड रहेको प्रभुको खुद ब्याज आम्दानी यो वर्ष २ अर्ब ५४ करोड पुुगेको छ । यता संचालन नाफामा पनि प्रभुले प्रगति गरेको छ अघिल्लो बर्ष यहि अवधिमा ८७ करोड ६२ रहेको मुनाफा यो वर्ष १ अर्ब ३९ करोड पुुगेको छ । यता बैंकले जगेडा कोषमा यो वर्षसम्म २ अर्ब ६ करोड जम्मा गरेको छ ।
बैंकले यो अवधिमा ८१ अर्ब २९ करोड निक्षेप संकलन गरी ६१ अर्ब ९७ करोड कर्जा परिचालन गरेको छ भने प्रभूू बैंकले अघिल्लो वर्ष ८.३८ प्रतिशतको अनुपातमा रहेको निस्क्रिय कर्जा दरमासुधार गर्दै यो वर्ष ४.२९ प्रतिशतमा झारेको छ ।
यो अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २९.७८ रुपैयाँ, प्रति सेयर नेटवर्थ १३४.८८ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १३.६३ गुणा कायम भएको छ ।